Happy birthday Google! - Open Engineering For Myanmar
Home » ကွန်ပျူတာ » ဘလူးဖီးနစ်
» Happy birthday Google!
ဒီနေ့မှာ ဂူဂယ် တစ်ယောက် ဆယ်နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ ဂူဂယ် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ မှတ်သား စရာလေးတွေ ရှိတဲ့ အတွက် အချို့ကို လေ့လာပြီး တင်ပြချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဂူဂယ် ဆိုတာဟာ ၁၉၉၆ ဇန်နဝါရီလမှာ လာရီပေ့ခ်ျ (Larry Page) နဲ့ ဆာဂျေး ဘရင်း (Sergey Brin) ဆိုတဲ့ စတန်းဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်က ပီအိပ်ခ်ျဒီ ကျောင်းသားလေး ၂ ယောက် တင်သွင်းခဲ့တဲ့ Search engine အကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ စာတမ်းလေး တစ်စောင် ကနေပြီး စတင်ပေါက်ဖွားလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (မြန်မာ ကျောင်းသားများလဲ ကိုယ်လုပ်တဲ့ စာတမ်းလေးတွေကို လက်တွေ့ အသုံးကျအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစား ပြုစုနိုင်ကြပါစေ၊ ဂူဂယ် လိုမျိုး အောင်မြင်တဲ့ Product တွေ ထုတ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။)အစကတော့ သူတို့ရဲ့ search engine ကို BackRub လို့ အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဆိုဒ်တစ်ခုရဲ့ အရေးပါမှုကို သူ့ကို ရည်ညွှန်းထားတဲ့ backlinks တွေပေါ်မူတည်ပြီး ခန့်မှန်း သတ်မှတ် ဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ မတိုင်မီကတည်းက ဒီ နည်းစံနစ်ကို သုံးထားတဲ့ Rankdex ဆိုတဲ့ search engine တစ်ခု ရှိနေနှင့် ပြီးသားပါ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ သီးစစ်လုပ်ကြရင်း နဲ့ အခု ဂူဂယ် ဖြစ်လာမယ့် search engine အတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ်တွေကို ခိုင်အောင် ချနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ သူတို့ search engine ရဲ့ လိပ်စာဟာ စတန်းဖို့ဒ် ယူနီဗာစီတီရဲ့ subdomain တစ်ခုဖြစ်တဲ့ google.stanford.edu အနေနဲ့ စတင်ခဲ့တာပါ။ google.com ဒိုမိန်း ကို ၁၉၉၇ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ မှာမှ မှတ်ပုံတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၈ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက် မှာ Google Inc. ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကားဂိုထောင်ထဲမှာ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို စတင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ငွေ အရင်းအနှီးကို Sun Microsystems ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ Andy Bechtolsheim က ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ တန် ချက်လက်မှတ်တစ်ခု စတင် ထုတ်ပေးရာမှ အခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ပါဝင်လာပြီး စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁.၁ သန်းအထိ တိုးတက်များပြားလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၉ မတ်လ ရောက်တဲ့ အခါကျမှ ဆီလီကွန် တောင်ကြားမှာ ရှိတဲ့ Palo Alto မှာ ကုမ္ပဏီကို ပြောင်းရွှေ့ပြီး ကျကျနန အခြေချ နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီ အဆောက်အဦးတွေကို Googleplex လို့ လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။ဂူဂယ်ဟာ သူ့ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ လွယ်ကူစွာ အသုံးချနိုင်မှုတို့ကြောင့် အသုံးချသူ အများစုက နှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၀၀ခုနှစ် က စတင်ပြီး ဂူဂယ်မှာ search keywords တွေကို အခြေခံတဲ့ ကြော်ငြာများ စတင် ထည့်သွင်းလာပါတယ်။ (ဂူဂယ်ဘယ်က ပိုက်ပိုက်တွေရသလဲဆိုတာ သိပြီနော် :P)။ ဂူဂယ် ဆိုတဲ့ နာမည် ဖြစ်လာပုံက တော့ googol (အဓိပ္ပါယ်က 10pow(100)) ဆိုတဲ့ စာလုံးကို google လို့ မှားပေါင်းရာက စလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Merriam Webster Collegiate Dictionary နဲ့ Oxford English Dictionary တွေမှာ google ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို “အင်တာနက်မှ အချက်အလက်များရယူရန် ဂူဂယ် search engine ကို အသုံးပြုခြင်း” လို့၂၀၀၆ မှ စတင်ပြီး ထည့်သွင်း ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂူဂယ်ရဲ့ အဓိက ဆားဗစ်က Google web search engine ဖြစ်ပေမယ့် သူ့မှာ အခြား ထင်ရှား လူကြိုက်များတဲ့ ဆားဗစ်တွေ အတော်များများ ရှိပါသေးတယ်။ စာဖတ်သူ အားလုံး သိထားပြီးသားလဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် လက်အညောင်းခံပြီး မရေးတော့ပါဘူးနော် :P။ အခုလောလောဆယ် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ဂူဂယ်ကို သုံးပြီး သီးစစ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အချို့ကို ပြုစုခဲ့တာ ဖြစ်သလို သူ့ကို အသုံးပြုပြီး ဘလောက်ဂါက တစ်ဆင့် နည်းပညာ တစ်ချို့ကို ဝေမျှပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ အနေနဲ့ အခုလို ဆောင်းပါးလေးနဲ့ ဂူဂယ်ရဲ့ ဆယ်နှစ်မြောက်မွေးနေ့လေးကို ကြိုဆို ဂုဏ်ပြုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။အကိုးအကားများhttp://en.wikipedia.org/wiki/Google
တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ Google ရဲ့ဖြစ်တည်မှု့လေးက သီးစစ်တစ်ခုကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုကတည်းက သူတို့ဆီက ပညာရေး စနစ်တွေ ဘယ်လောက် ကောင်းသလဲဆိုတာ ပေါ်လွင်ပါတယ် http://www.cuil.com/ တို့လို Google အင်ဂျင်နီယာအဟောင်းများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အပြိုင်အဆိုင်တွေ ပေါ်ပေါက်လာပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချစ်လှစွာသော Goolgle သာ အောင်မြင်စွာ ဆက်လက် တည်တံနေမယ် လို့ ယုံကြည်မိပါတယ် အစ်ကိုရေ